Bogga ugu weyn > Gawaarida Kale Ee Sameeya > Ford
Nalalka laydhka hogaamiya ee DOT ee la ansixiyay 1979-1986 Ford Mustang, oo lagu heli karo midab madow/chrome, ayaa la imanaya laydh sare iyo laydh hoose, qiima badan oo loolan ugu jiro hagaajinta nalalkaaga hore.
Our leydi 1979-1986 Mustang Led Led la imow dogob sare iyo dogob hoose oo kaliya kaas oo ah 6500K heerkulka midabka oo ku xirma iftiinka qorraxda dabiiciga ah si loo wanaajiyo hufnaanta aragtida wadista iyo kordhinta raaxadaada wadista. Wanaagsan biyuhu iyo waxqabadka boodhka. Kiis guri oo aluminium ah oo waara oo leh wax qabad kuleyl wanaagsan. Cufnaanta tamarta sare iyo xoojinta iftiinka si loo ballaadhiyo qadka aragtida, loo kordhiyo xaaladaha wadista nabdoon adiga. Nalalkaan Ford Mustang 1979-1986 waxay leeyihiin isticmaal hooseeya, hufan, keydinta tamarta iyo sifooyinka ilaalinta deegaanka. Awoodda sare ee waqtiga jawaab -celinta/daminta, Nolosha muddada dheer in ka badan 50000 saacadood. Ku xir oo ciyaar, rakibidda fudud, badiyaa waxay kugu kacaysaa qiyaastii 30 daqiiqo hagaajinta nalka hore. Ku habboon 1979-1986 Ford Mustang.
Faahfaahinta 1986 Mustang Led Led
aragti 4x6 inch square led led headlight
Tilmaamaha 1986 Nalalka Mustang
Faa'iidooyinka 4x6 Led Headlines